လူမ တဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်တွေဟာဘာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူမ တဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်တွေဟာဘာလဲ
- pioneer youth
Posted by pioneer youth on Jul 6, 2012 in Myanma News | 12 comments
မနေက သူငယ်ချင်းတယောက်က အငြင်းအခုန်လုပ်နေတာနဲ့ ဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ youtube မှာ မဖွယ်မရာတွေ တင်ထားတာတွေရပါတယ် အဲဒါက သဇင်လို့နာမည်တတ်ထားတာတွေရပြီး ယောက်ကျားတယောက်က ကျင်နာမှူ့မရှိသော သံဝါသပြုမှူကို တိရစာ္ဆန် တကောင်လိုပြုကျင်နေတာတွေရပါတယ် သဇင် ဒါမဟုတ် တယောက်ယောက်ပေါ့ youtube က ဒီလို မျိုး အခြအနေအတွေအထိ ဘာလို တင်ခံထားရတယ်ဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ပါဘဲရိုက်ထားတဲ့ လူကလည်း နှမသားချင်းမစာနာ တာတွေရတယ် ယောက်ကျားတွေ ကတော့ယောက်ကျားတွေပါဘဲ ကျားဆိုတာ ဥပုဒ် မစောင့်ပေမဲ့ စောက်ကျင့်မယုတ်ရဘူး မိန်းမဆန်တဲ့ ယောက်ကျားမဖြစ်သင့်ဘူးဗျ သူဘာသူ သဇင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ခတ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သွေးသားရှိသူတွေတိုင်းခံစားနှိုင်တဲ့ အခွင့်ရေးရှိပါတယ် အခု တင်ထားတာလဲ အမေရိကားမှာနေတဲ့ချာတိတ်တယောက်ပါ ဘယ်ကနေရလာလဲ ဆိုတာတော့ ကာယက့ရှင်တွေ ပိုသိမှာပါ ဥပမာ အဲဒီကောင်မလေးရဲ့နေရာ သူမိသားစုဝင် ညီအကို မောင်နှမဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုခံစားမလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်လို့ပြောပြီး ရိုင်းဆိုင်းနေကြရင် ဖြင့်ဘာသာတရားကို ဖျောက်ကွယ်ဖို့သာ ရှိပြီပေါ့ တကယ်သာ သဇင်မှန်ရင် သူအိမ်ထောင်ရေးကသွားပြီပေါ့ ဗျာ လူလူခြင်း စာနာရင် ဒါကို မလုပ်ရဘူးဗျာ..
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကို လည်း ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ မြန်မာ လူငယ်တွေ အကျင့်ဇာရိတ္တတတွေကို အကြံပြုကြပါဦးလို့.. တင်ထားတဲ့ ချာတိတ်လေးရဲ့ ဂျီမေးက onekokoaung@gmail.com .တဲ့ လင့် ကတော့ youtube ထဲကိုသွားပြီး thazin လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပေါ်လာပါပြီ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ ကိုဖါသာကိုဆုံးဖြတ်ပြီး ဘာလုပ်သင့်တာ်ဆိုတာ သာ ဝိုင်း ကူကြပါ..။
About pioneer youth
pioneer youth has written 12 post in this Website..
View all posts by pioneer youth →
အင် းးးးးးးစိတ်တော့အကုန်သား. သို ့သော်အတော့်ကို တူလွန်းနေ၏။
ကျုန်ုပ် လူဟား ပြောမည်… သဇင်လုံးဝ မဟုတ်ပါကြောင်း.. ရုပ်ခြင်းဆင်သော အာရှသူတွေ ရိုက်သတ်လို့တောင်မကုန်ဘူး…။ သို့သော် အမျိုးသမီးလေးများအား အထူးသတိပေးချင်သည်… တစ်ကိုယ်လုံးတောင်ပေးထားပြီး live မြင်နေရမှတော့ ဘာလို့ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံ၊ vedio အရိုက်ခံနေအုန်းမှာလဲ…။ အကယ်၍ အတင်းအကြပ်ရိုက်ရန်တောင်းဆိုလာပါက သင်၏အမျိုးသားသည် မရိုးသားသူဟု ဒုံးဒုံးချ ယုံမှတ်ပါလေ..။ အမျိုးကောင်းသမီးများ အတွက်သာ…
သူရို့ဟာ သူတို့ ကျေနပ်မှုရှိလို့
ကုန်းကြ မှုတ်ကြ လိုးကြတာ သဘာဝ ပါ
အခုလို မူဗီဖိုင် ထွက်လာတာ သဇင် ဆိုတဲ့မိန်းမ တစ်ယောက်ပဲ နစ်နာတယ် ဆိုပြီး နာတာလား
အဲဒီ မူဗီဖိုင်ကိုကြည့်မိတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကြ မနာဘူးလား
ကိုရင်ငပေ ညစ်နေပါတယ်ဆို… ခုလို ထော်လော်ကန့်လန့် ပိုစ့်လာတင်ရတယ်လို့နော်.. ကိုပေ..
စိတ်လျှော့…စိတ်လျှော့…2လပိုင်း 1ရက်နေ့ မတိုင်ခင်က နေ့စွဲလေးတွေလိုမျိုး .. ဟိုး.. ရှေ့မှာ…တသီကြီး… လိမ်မာမှ အိမ်ပါမယ်..။
အခု မူဗီကို လူငယ်တွေ
အဘ သဘောထား ပြောရရင်တော့ ။
” ကျင်နာမှုမရှိသော သံဝါသပြုမှုကို တိရိစာ္ဆန် တကောင်လို ပြုကျင့်နေတာတွေရပါတယ် ”
၁ ။ ကျင်နာမှုမရှိဘူး လို့ မထင်ပါဘူး ။
သံဝါသပြု တဲ့အခါမှာ သူတို့ စိတ်ကြိုက် Position ကို သူတို့ ရွေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
” ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်လို့ပြောပြီး —- ဘာသာတရားကို ပျောက်ကွယ်ဖို့သာ ရှိပြီပေါ့ ”
၂ ။ မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ( တရားဝင် ) ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
၃ ။ ဒီကိစ္စမှာ ဘာသာတရား ပျောက်ကွယ် တဲ့ ကိစ္စက သိပ် အရေးမပါပါဘူး ။
အဓိက အရေးကြီးတာက လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် ပျောက်ကွယ် နေတာပါ ။
အဘ ကြားရသလောက် ဒီ VDO ဟာ သဇင် အစစ်ပါ ။
သူ့အရင် ရည်းစားဟောင်း နှင့် နေတုန်းက ရိုက်ထားတာပါ ။
အဲဒီ ရည်းစားဟောင်း က ဒုဝန်ကြီး + ညွှန်ချုပ် ရဲ့သားဖြစ်ပြီး ၊
လက်ရှိ အမေရိကန် မှာ ကျောင်းတက်နေတယ်လို့ ကြားပါတယ် ။
အရင်တုန်းက ကောင်းပြီ ကောင်းရဲ့နှင့် ၊
အခု သဇင် လက်ထပ်တော့မှ ထွက်လာတာ ၊
ဘာသဘောလဲ မသိရပါ ။
သဇင် က ကံကောင်းတာက ၊
ဩဇီက မြန်မာ တစ်ယောက်နှင့် လက်ထပ်ထားတာပါ ။
ဩဇီ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
သူနှင့် လက်မထပ်မှီက ကိစ္စတွေကို သိပ်ဂရုစိုက်မယ် မထင်ပါ ။
ဩဇီ နိုင်ငံသား တွေက မြန်မာ နိုင်ငံသား တွေထက်
ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေမှာ သဘောထား ကြီးလေ့ ရှိပါတယ် ။
သဇင် ရဲ့ အရင်က Character ကို သိပ် အထင်မကြီးလှပေမယ့် ။
မြန်မာ နိုင်ငံသူ တစ်ယောက်အနေနှင့် ၊
သဇင် ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
အဘဖော ပြောသလိုဆို အဲဒိအကောင်က တေ်တော် စုတ်ပဲ့တာပဲ…။ သူ့ ညီမ ကိုအဲဒိလိုတင်ရင် ကြိုက်လောက်ပါ့မလား …။ အပြင်မှာ ဘယ်လိုပဲ ဆက်ဆံ ဆက်ဆံ ခဲ့ ယောက်ျားရ သွားမှ မှတ်တမ်းကိုဖြန့်တယ်ဆိုတော့ တော်တော် လူမဆန်တာပဲ…။ သာမန်လူတန်းစးကတော့ ဒီလောက်မယုတ်မာဘူးဆိုတာသေချာတယ်….။ ဒင်းတို့ကြောင့် ဗမာတွေ နာမယ်ပျက်ရတာများပြီ…။ ပဒေသရာဇ် စနစ်ကျဆုံးပါစေ……….
အဘဖောရေ ဒုဝန်ကြီးသား—-ညွှန်ချုပ်သားဆိုပြီး YouTube ကကွန်မန် ့တွေ
မှာတွေ ့ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။နယ်တွေမှာ ဒီအခွေကို လုယက်
သဇင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးသဘောတူ အချိန်က နေ ခဲ့ အခြေအနေ။
အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် ကနေ
ခု လို လူမှု ရေး ဆိုက် တွေ မှာ တင် လာ တဲ့ အခါ မကျေနပ်သူ က တင်တဲ့ လူ ကို သိရင် တရားစွဲ လို့ ရလား။
ဥပမာ အိမ်ထောင်သည် လင်မယား အိမ်မှာ တပတ် ၁ဝ ရက် အစ ရှိ သည်ဖြင့် ဧည့် မပြတ် လို့ သူတို အလို ဆန္ဒကို ဟိုတယ် တခု မှာ သွားဖြရှင်း တာ မျိုး ကနေ video data အဖြစ် မှတ်တမ်း တင် ခံ ရပြီး ဆိုက်ပေါ် ရောက်သွားမယ် ဆိုရင် အဲဒီ ဟိုတယ် ကို တရားစွဲ လို့ ရလား။
“youtube က ဒီလို မျိုး အခြအနေအတွေအထိ ဘာလိုတင်ခံထားရတယ်ဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ပါဘဲ”
youtube ကမင်းအိမ်က ထမင်းစားပန်းကန်တွေလိုပဲ ဘာထဲ့စားစားရတယ်။ မင်းဟာမင်း -ျီးထဲ့စားရင် တော့ ကိုယ့်သမိုင်းပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ -ျီးထဲ့တာလက်ခံလဲ လာပြောမနေနဲ့ … လေတယ်။
သူတို့ဟာသူတို့ စောက်ကမြင်းကျောထပြီး ရိုက်ထားတာလေ ဘယ်သူမပြုမိမိပြုတဲ့။ ဘယ်လိုဝိုင်းကူရမှာလဲ။ သဇင်အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဘူး
တားက ကလေး ဆိုတော့…သိပ်တော့ နားမလည်ပါဘူး။